पहिलो पटक सुँगुरको मृगौलालाई मानवका लागि जोडे, यसले गर्यो झनै राम्रो काम ! – Nep Stok
पुष २, २०७८ शुक्रबार 156
एजेन्सी । चिकित्सा विज्ञानले विश्वमा असम्भव भनिएका कुराहरुपनि पूरा गरेको छ । अहिले एउटा घटनाले दुनियाँ चकित बनेको छ । सुँगुरको मृगौलालाई मानिसमा प्रत्यारोपण गरिएको छ । न्यूयोर्कका शल्यचिकित्सकहरूले आनुवंशिक रूपमा परिवर्तन गरिएको सुँगुरमा हुर्किएको मृगौलालाई मानव मृगौला रोगीमा सफलतापूर्वक प्रत्यारोप गरेका छन् ।
यो अंगले झनै राम्रो रूपमा काम गरेको पाइएको छ । जुन वैज्ञानिक सफलताले एक दिन गम्भीर बिरामी बिरामीहरूका लागि अंगहरूको विशाल नयाँ आपूर्ति प्रदान गर्न सक्ने इतिहास बनेको छ । अन्वेषकहरूले लामो समयदेखि सुँगुरहरूमा मानिसमा प्रत्यारोपणका लागि उपयुक्त अंगहरू बढाउन खोजिरहेका थिए। हालका वर्षहरूमा क्लोनिङ र आनुवंशिक इन्जिनियरिङजस्ता प्रविधिहरूले त्यो दृष्टिलाई वास्तविकतामा परिणत गरिदिएको छ ।
तर मानिसहरूमा यी प्रयोगात्मक अंगहरूको परीक्षणले चुनौतीपूर्ण नैतिक प्रश्नहरू प्रस्तुत गरेको भने छ। के अब मानिसका लागि मानिस नै जरुरी हैन र भन्ने विषय बनेको सबैले सोच्न बाध्य भने भएको छ । अन्वेषकहरूले मात्र ५४ घण्टाको लागि नतिजाहरू ट्र्याक गरे, र धेरै प्रश्नहरू यस्तो अपरेशनको दीर्घकालीन परिणामहरूको बारेमा जवाफ दिन बाँकी नै भएपनि तत्कालका लागि राम्रो काम गरेको छ ।
यो सफल प्रयोगपछिपनि अहिले नै बिरामीहरूको लागि सुँगुरको मृगौला उपलब्ध हुनेछैन, किनकि अझै महत्वपूर्ण चिकित्सा र नियामक अवरोधहरू पार गर्न बाँकी नै छ । तरपनि यस क्षेत्रका विज्ञहरूले शल्यक्रियालाई कोसेढुङ्गाको रूपमा स्वागत गरेका छन् । यो ठूलो सफलता हो, जोन्स हप्किन्स स्कूल अफ मेडिसिनका प्रत्यारोपण शल्यक्रियाका प्राध्यापक डा. डोरी सेगेभले भने, जो अनुसन्धानमा संलग्न थिए । सुँगुरहरूबाट अंगहरूको एक स्थिर आपूर्ति जसमा अन्ततः मुटु, फोक्सो र कलेजो समावेश हुन सक्छ भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ ।
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, पुस २ गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextसुनले भरिएको उल्का पृथ्वीको नजिक : पृथ्वी भरिकै अमुल्य चीज कहाँ खस्छ ?
पुस १५ गते सार्वजनिक बिदा दिन माग